Asomafo no, na wɔn mu pii yɛ apofofo a wɔnim korow hare paa, nanso saa akwantu yi deɛ, wɔdii amia. Nea ɛwom ne sɛ, Galilea Po no, na mmepɔ atwa ho ahyia, na na nsuo no so taa yɛ hye. Nanso ɛwɔ hɔ ara a, mmepɔ no so mframa a ano yɛ nwini no bɔ fa nsuo no so, na esiane sɛ nsuo no so mframa yɛ hye nti, sɛ ɛne mframa nwininwini no hyia a, ɛdan ahum wɔ po no so. Ɛno bi na ɛsii wɔ saa akwantu no mu. Ɛyɛɛ saa no, po asorɔkye no bɔ baa korow no mu, na “nsuo firii aseɛ bu faa wɔn so na ɛde wɔn too asiane mu.” (Luka 8:23) Yɛreka yi nyinaa na Yesu ada!
Ná mmarima yi yɛ apofofo a wɔde korow afa ahum mu ara akwadare mu. Nanso ahum wei deɛ na wɔnhuu bi da. Afei deɛ, ehu kaa wɔn ma wɔkɔnyanee Yesu kaa sɛ: “Awurade, gye yɛn na yɛrebɛwuwu!” (Mateo 8:25) Ná asuafo no suro sɛ anhwɛ a nsuo no bɛfa wɔn!
Share Share Yesu Maa Ahum Yɛɛ Dinn